Kwenze ngokwakho kuhhavini engadini Izinzwa zobuciko - imibono yasekhaya nengadi
Kwenze ngokwakho kuhhavini engadini
22.07.2014 Kuthunyelwe ngu: Sense Art
Ngaphandle kwekhoneni, Ingadi, Ngekhaya nengadi, Kwenze ngokwakho
Kulula ukwenza i-oveni yakho? Empeleni, ukwenza izikebhe zomlilo kanye nazo zonke izinhlobo zezindawo zokucima umlilo kuwubuciko obunemfihlo ethile nemininingwane enikezwe umphathi wokufunda. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngegumbi lokuhlangana elivaliwe, izinto zilula. Ukufezeka komqondo owethulwe engadini kungumzamo ongasetshenziswa ngempumelelo ngabangebona ochwepheshe. Ifomu lingasuswa noma lithengwe. Vele, lapho kungekho lwazi ngokwakhiwa kwezakhiwo zokwakha, kuyadingeka ukufuna usizo lochwepheshe. Ukuzikhethela kwezinto zokwakha kufanele futhi kuboniswane kahle, kepha empeleni, lo muvini uwumbono ongasebenza kalula futhi zonke izitsha ezilungiselelwe kuwo zizokunika iphunga lawo.
Njengoba kunjalo isiphakamiso sethu seGadi BBQ, imininingwane eminingana kufanele icatshangwe futhi, okubaluleke kakhulu, kude nezinto ezinokutsha. Uma unokugeleza njalo endaweni okwakhiwa kuyo, kunengqondo ukuthi ukuvulwa kwesithando kufana nakho, kepha lokhu akubalulekile kangako.
Ukuhlelela umsebenzi okuhle kuyimfihlo yempumelelo. Ukubona amaphutha akho ngaphambi kokuwenza kuzokongela imali nesikhathi. Alukho uhlelo oluphelele nolusendaweni yonke. Lapho okuthile kufanele kwakhiwe kunezinkulungwane zemininingwane okudingeka icatshangwe. Kungakho sizokunikeza umqondo neminye imininingwane, futhi ngokunye uzodinga ukufaka umsebenzi nokucabanga okudala. Ubukhulu bezithando zemoto kubaluleke kakhulu. Zibuye zichaze ukusebenza kwawo, ie. okuzobhakwa noma kubheme kukho.
Okokuqala bonisa ububanzi bokuzwa (G) nokuphakama kwayo (E). Ngokuya kubo, ubukhulu bangaphandle besakhiwo esisekelwayo (A, B, C, D) nokuphakama kwe-chimney (F) nakho kunqunyiwe. Bala futhi ubukhulu ngaphandle kokuxhumeka (a no-b), uma ngabe ulindela eyodwa, kanye nohlobo nesigaba sokuhlanganiswa okudingekayo (c) nobukhulu bangempela bezakhi (d). Kuyinto efiselekayo ukuthi umzimba we-chimney okungenani ube yi-50% ephakeme kunesithando somlilo, noma uma ukuphakama (E) kungu-50cm, khona-ke i-chimney kufanele ibe phezulu (F) okungenani i-75cm (kusuka esisekelweni). Ububanzi nokuphakama kokuvulwa kwe-vault / orifice (e no f) kufanele kube cishe yi-50% yokuphakama kwayo (E). Ukwehluka ngesimo nobukhulu kuyenzeka, ngoba lokhu kuncike kakhulu eminyango, futhi ngawo kungalawulwa komlilo. Ngakolunye uhlangothi, bahlukanisa igumbi lokuhlangana nomzimba we-chimney, ukudala indawo evaliwe.
Khetha izinto zokwakha eziyisisekelo bese ubala inani olidingayo.
Kulolu hlobo lokwakha, ngokungafani Indawo yokudlela engadini, kungcono ukwenza isisekelo, ngoba isisindo sonke singadala ukuthi siwe noma sisonteke. Thela isisekelo sokuqinisa esiqinisiwe bese uvumela ukuqina. Kuyo yakha kusuka emabhulokini noma izitini izindonga ezintathu ezisekelanayo, faka ifomathi bese uthela isaladi eliqinisiwe lesibili. Ngemuva kokuthi isomile, dweba, uhlele, futhi ulungise isisekelo sesithando somlilo esizayo. Sebenzisa izitini ezingamelana nokushisa. Dala umbuthano wamahhafu wezitini eziqinile ezizungezile, ushiye indawo yomgodi. Kuzo, engeli (ukufezekisa ukwakheka kwe-spherical) imigqa elandelayo. Kungcono, lapho ufinyelela umugqa wesibili noma wesithathu, ulolonge i-arch yokuvula. Lokhu kuvame kakhulu kuncike emnyango noma emnyango okhethiwe. Kuhle nokulungiselela amakhadibhodi aminyene noma izifanekiso ze-styrofoam ezinesimo ne-arc ye-hemisphere. Uzokwazi ukubashiyela ngaphakathi ifomu ukukuqondisa njengoba uzokwakha ngenkathi usekela igumbi eliphakeme. Sebenza kancane futhi ngendlela; shiya isikhathi esanele sokuqinisa into ngayinye. Lapho usuqede isithando somlilo kanye nokuxubeka kuqinile, uzokwazi ukwephula lezi zindlela bese uzidonsela emgodini. Susa i-arch yomgodi mayelana ne-1 / 2 kububanzi bayo ngaphandle kwe-hemisphere, ushiye umgodi we-chimney. Kufanele ibekwe endaweni yokuthi lapho ukuvulwa kuvaliwe, igumbi lokuhlangana lingatholakali komoya-mpilo. Imvamisa, kuvame ukuhlinzekwa ungqimba olungaphandle, lokufakwayo lokudotshwa kwe-wadding, amatshe, ubumba ngisho nokuhlobisa ngobuciko ngama-tile enziwe ngengilazi noma ngethoshi. Lapho konke sekumi ngomumo, vumela ukome ngokuphelele isikhathi esingangesonto bese ukhanyisa i-oveni yakho.
ingadi, engadini ye-pizza pizza, izithando zokubasa, ezwa egcekeni, imibono, imibono yengadi, imibono yegceke, imibono yasekhaya, imibono yendlu, umbono wesithando somlilo, chimney, yenza izindlebe, uzenzele isithando somlilo, zenzele, indawo yokubasa umlilo nge-chimney, isithando somlilo, kuhhavini engadini, kuhhavini egcekeni, kuhhavini we-pizza, kuhhavini wezitini, isitofu sikanyalo, imibono yasekhaya, umklamo ongaphakathi, ifenisha, imibono yangaphakathi, design imibono, ikhaya lesimanjemanje, ukuhlobisa imibono, imibono yobuciko
Ingaphakathi limhlophe ngoba lingokwesimanje
Okumhlophe kuheha ngobumsulwa bayo nobumnene. Ingaphakathi in white ithambisa imigqa, idala ...
Imihlobiso yetafula le-Easter
Eminye imibono yokuthi ungahlobisa kanjani itafula lethu le-Easter. Ukuvuselela kanye nemizwa yemikhosi ...
Umhlobiso wethebula ngobusuku bonyaka omusha
Eminye imibono emnandi yokuthi ungahlela futhi uhlele kanjani itafula loNyaka oMusha. Dala umkhiqizo ...
Eminyakeni yamuva, umbala obomvu ubesesikhathini futhi umelelwe ngokuqinile ekwakhiweni kwesimanje ...
Zenzele umbhede wepallet okhanyayo
Sithinte kaninginingi esihlokweni sokwenza ifenisha ye-pallet, kepha lapha sizophonsa okusha nge ...
Chocolate cubes nge sitrobheli
Umbono omuhle futhi omusha we-sitrobheli esimnandi ocwilisa ushokoledi. Le nhlanganisela ...
Cherry izinsini for ubumnandi kanye nempilo
Esikhathini se-Cherry, noma yimuphi umqondo we-Culinary ngalezi zithelo uyimpilo futhi umnandi ...
Iphrojekthi yendlu enhle yokhuni nesitayela enophahla lwendlu
Това е един изключително изчистен и стилен проект на дървена къща с обемна дневна част и м...
Sesha kungobo yomlando - Khetha inyanga - Septhemba 2020 Julayi 2020 NgoJuni 2020 Kwangathi 2020 Ephreli 2020 Mashi 2020 NgoFebhuwari 2020 Janawari 2020 UDisemba 2019 Novemba 2019 Ngo-Okthoba 2019 Septhemba 2019 Agasti 2019 Julayi 2019 NgoJuni 2019 Kwangathi 2019 Ephreli 2019 Mashi 2019 NgoFebhuwari 2019 Janawari 2019 UDisemba 2018 Ngo-Okthoba 2018 Septhemba 2018 Agasti 2018 Julayi 2018 NgoJuni 2018 Kwangathi 2018 Ephreli 2018 Mashi 2018 NgoFebhuwari 2018 Janawari 2018 UDisemba 2017 Novemba 2017 Ngo-Okthoba 2017 Septhemba 2017 Agasti 2017 Julayi 2017 NgoJuni 2017 Kwangathi 2017 Ephreli 2017 Mashi 2017 Novemba 2016 Julayi 2016 NgoJuni 2016 Kwangathi 2016 Ephreli 2016 Mashi 2016 Janawari 2016 UDisemba 2015 Novemba 2015 Ngo-Okthoba 2015 Septhemba 2015 Agasti 2015 Julayi 2015 NgoJuni 2015 Kwangathi 2015 Ephreli 2015 Mashi 2015 NgoFebhuwari 2015 Janawari 2015 UDisemba 2014 Novemba 2014 Ngo-Okthoba 2014 Septhemba 2014 Agasti 2014 Julayi 2014 NgoJuni 2014 Kwangathi 2014 Ephreli 2014 Mashi 2014 NgoFebhuwari 2014 Janawari 2014 UDisemba 2013 Novemba 2013 Ngo-Okthoba 2013 Septhemba 2013 Agasti 2013 NgoJuni 2013 Kwangathi 2013 Ephreli 2013 Mashi 2013 NgoFebhuwari 2013 Janawari 2013 UDisemba 2012 Novemba 2012 Ngo-Okthoba 2012 Septhemba 2012 Agasti 2012 Julayi 2012 NgoJuni 2012 Kwangathi 2012 Ephreli 2012 Mashi 2012